Izicabha zokuqala zokwamukela ikhaya lakho | Bezzia
USusana godoy | 09/09/2021 14:00 | Izesekeli zasekhaya
Yonke imininingwane yomhlobiso ibalulekile. Ngakho-ke, lapho sihlobisa ikhaya lethu sihlala sizama ukulinikeza ukuthinta okukhethekile nokwakho. Uma ungomunye walabo abakhetha ukukhetha okwangempela, unenhlanhla ngalokhu izicabha zokuqala. Kuhlala kushiwo ukuthi incwadi esembozweni isho okuningi ngengaphakathi futhi kulokhu ngeke ibe ncane.
Ngoba sibonga lezi zinyawo, injabulo izoba yingxenye yesinyathelo sokuqala esisithathayo. Ungakhetha uku imishwana yoqobo, imidwebo yama-movie noma eminye imininingwane eminingi ezokhonjiswa kusuka phansi. Uzoba ngomunye womakhelwane abahlekisa kakhulu esakhiweni. Awucabangi kanjalo?
1 Imilayezo ehamba phambili yezivakashi eziletha ama-doormats
2 Izicabha zokwamukela ngendlela yangempela
3 Iminyango yangokwezifiso
4 Uchungechunge lwakho oluthandayo
Imilayezo ehamba phambili yezivakashi eziletha ama-doormats
Njalo, noma cishe, ukuvakashelwa ekhaya kwamukelekile. Kepha-ke, noma singafuni ukubonakala ngathi asinakho ukuzithoba, sithula izinto esizicabangayo. Ngakho-ke, uma ungazi ukuthi ungasho kanjani ukuthi abafiki belambatha, akukho okufana nokubheja ezinye izivalo zeminyango ezinemishwana eqondile enjalo thanda: 'Izivakashi eziphezulu ziphakamisa ubhiya nokwehlisa udoti.' Mhlawumbe ngesikhathi sokungena banikezwa ukuthi kubhekiswe kukho noma okungenani, ukumamatheka kuzobeka eceleni futhi uma uthanda, ungayithenga lapha ngokufanayo.
Ezinye izivalo zeminyango zikhomba ewayinini, noma ukuvala imizwa emibiYize kungeyona into ebonakalayo, kuyinto esiyithandayo. Abanye abanye banemithetho yendlu, ukuze kungabibikho muntu omangayo ukungena. Ngakho-ke, uzokwazi vele ukuthi yini ophikisana nayo. Imodeli efana lokhu nakanjani kuzomangaza wonke umuntu odlula ngendlela. Ngakho-ke iyafana nokwangempela, njengoba siyithanda.
Izicabha zokwamukela ngendlela yangempela
Igama 'wamukelekile' likhona kakhulu kuningi lalezi zinsiza. Kepha kuyiqiniso ukuthi labo esibathola e-Amazon bayiphatha ngendlela eyinqaba. Ngoba ngamazwi kuphela kungahle kungaphelele, ngakho-ke, sibheja ekwenzeni ukukhuluma ngama-movie afana ne-'Star Wars ' bese ubadlulisela ohlangothini olumnyama nge lokhu isicabha somnyango esibalulekile.
Yize uma uwuthanda umculo, ngeke ukwazi ukukhohlwa okukodwa kwe- Izingoma ze-rock zaseSpain ezifana nalezi ezaziculwa nguMiguel Ríos ngaleso sikhathi. Manje ungaba nayo ezinyaweni zakho futhi ungalokothi usho kangcono ngomqondo ofana nalowo lapha siyakubonisa. Kuyohlale kunombono ngendlela oyithandayo!
Impela nawe ungakwenza i-doormat yakho ngendlela yomuntu uqobo, ukuze wonke umndeni amelwe ngandlela thile. Ngakho-ke, okuhle kakhulu ongakwenza ukubheja ukubeka amagama akho ngaphansi kwesicathulo ngasinye ekwakhiweni njengoba kubonakala. lapha. Uma ungenazo izingane, ungahle ube nezilwane ezifuywayo futhi zingaba khona naku-doormat wakho, ngendlela efanayo nokuthi uhlala wedwa noma nithandana. Ngoba zonke izinhlobo zemindeni zizomelwa emcabangweni onjalo.
Uchungechunge lwakho oluthandayo
Uma kukhona uchungechunge oluye lwaba intandokazi enkulu yesikhathi sonke lokho 'Abangane'. Manje baphinde bahlangana futhi ngohlobo lwe-documentary ongayijabulela kuzingxenyekazi. Kepha ngemuva kukhona konke lokho ukuzijabulisa kwamafulethi amabili nabangane abangu-6 abasilethele ukumamatheka okuningi kunokulindelekile. Ihlaya okuthi yize isikhathi siqhubeka liba nempumelelo enkulu, ngakho-ke, akukho okufana nokukhumbula esinye sezimo ezikhona manje. Njengoba sonke siyayazi ikhefi lapho babenosofa babo futhi bahlangana khona usuku lonke. Manje usungamukela ekhaya nge 'Central Perk' onayo lapha. Akuwona umqondo omuhle lowo?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Izesekeli zasekhaya » Izicabha zokuqala zokwamukela ekhaya lakho